Global Voices teny Malagasy » Georgia: Mampitabataba orthodoksa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Novambra 2009 21:48 GMT 1	 · Mpanoratra Onnik Krikorian Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Zeorzia, Fahalalahàna miteny, Fivavahana
Any amin'ny firenena mpivavaka indrindra ao atsimon'i Kaokazy izay ahitana Patriarka an'ny fiangonana Orthodoksa mbola mandrisika ny fiterahana maro , dia mbola fady izany mitsikera mpitondra fivavahana izany. Mbola ratsy kokoa noho izany sady mampidi-doza ny manivaia azy ireny, araka ny taterin'ny  This is Tbilisi Calling [miantso ity i Tbilisi].
Notaterina fa nahasarona ireo mpanao heloka tompon'antoka tamina lahatsary satirika[mampihomehy toa maneso] “tsy mahalala menatra sy manompa” ny lehiben'ny Fiangonana Orthodoksa ka nampitabataba nanerana ity firenena fatra-pivavaka ity ny polisy Georgiana. Ny fanambarana nataon'ny minisiteran'ny atitany no nahafantarana fa mpianatra madinika sy mpianatra any amin'ny anjerimanontolo ry zalahy ireo.[…]
Nasondrotr'i Evolutsia hivelatra kokoa ny adihevitra ka nosinganiny ny herin'ny Fiangonana sy ny fahalalahana hiteny. Tao amin'ny singan-dahatsoratra tao amin'ny vaovaon'ny bolongana vaovao mamoaka vaovao amin'ny teny anglisy i Inge Snip no nampaneno ny lakolosy fanairana .
Araka ny fahafantarako azy, ny fototra lehibe iray manorina ny fahalalahana dia ny fahalalahana miteny. Avy amin'ny fahalalaham-pitenenana no ahafahan'ny firenena iray maneho amin'ny olom-pirenena tsirairay fa omena alalana hohenoina ny hevitr'izy ireo, tsy maninona izay votoatiny. Ankoatra izany ny tena demaokrasia dia mamela ny fanesoesoana ny tsongoin’ olom- bolo eo amin'ny fiaraha-monina handeha, fa avy amin'ny fanaovana izany no anehoany ny fahamatorany.
Raha fehezina dia tsy misy antony tokony hanaovana famotorana amin'ity raharaha ity, na tokony tsy hisy izany; saingy ny mifanohitra amin'izany moa no ataon'ny mpampihatra ny lalàna, satria misy ny karazana fitakiam- bahoaka amin'izany. Amin'ny maha-mpianatra ny lalàna, dia ity no iray amin'ny famotorana ataon'ny fitsarana kidaladala indrindra henoko.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/11/03/4053/
 mbola mandrisika ny fiterahana maro: https://globalvoicesonline.org/2009/03/30/georgia-holy-baby-boom/
 no nampaneno ny lakolosy fanairana: http://networkedblogs.com/p16567796